Ukukhuluma kuyajiya: Uyafufusa umbango we-Inkatha ne-IFP yaseGoli - Bayede News
Ukukhuluma kuyajiya: Uyafufusa umbango we-Inkatha ne-IFP yaseGoli
Isihumusho: Iqiniso lokubusa iNingizimi Afrika ngaphandle komasipala
Kumaqembu abalwa njengalawo aphumelele okhethweni loHulumeni Bendawo obelungomhla lu-1 kuLwezi igama le-Inkatha Freedom Party ( IFP) kalisali. Leli qembu eliholwa nguMnu uHlabisa libe nomkhankaso omuhle nolizuzele abaseki abaningi. Lokhu abanye batusa isinwe abakwazi ngaso ukusebenzisa ubukhona komsunguli weqembu uMntwana wakwaPhindangene noHlabisa.
Isithombe esivelile ngesobuholi obubumbene, obubambisanayo nobunombono owodwa-ukunqoba ukhetho. Ukunqoba kwe-IFP eminye imikhandlu nokuba nezinombolo eziphezulu kweminye lapho kudingeka khona ukubambisana kuyenze yaba linoni kwabonakala ukuthi kunemikhandlu engeke ibumbeke ingekho.
Ngokuqonda lokhu leli qembu ngempelasonto eyedlule limemezele ithimba labakhongi elizokhuluma namaqembu afisa ukwakha ubuhlobo ne-Inkatha. Kubakhongi kukhona uMnu uNarend Singh, uMnu uThami Ntuli oyiMeya yaseNkandla, uMnu uMkhuleko Hlengwa noMnu uBonginkosi Dlamini oyilungu leSishayamthetho eGauteng.
Okuhehe abezindaba nezingqapheli enkulumeni kaMengameli we-Inkatha uHlabisa ngempelasento eyedlule, kube wukuphawula ngeqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) nakuqinisekisile ukuthi kuyo kabalindele buhlobo.
“Angikubeke kucace, ukuthi lapho sizobusa khona njengeqembu eliholayo angeke singene ekubambisaneni ne-ANC, ngenxa yokuthi abazange babe nokwethembeka kithina ngaphambilini. Benzele phansi abantu baseNingizimu Afrika nabavoti bakuveza ngokusobala ukungeneliseki nge-ANC”, kusho uHlabisa engacwayizi.
Kwezinye izizathu ezibekwe nguHlabisa ngezokuthi i-ANC KwaZulu-Natal ijivaze umsunguli weqembu ngezindaba zeNdlunkulu kanye nokuqamba isifunda iZululand ngeMzala Nxumalo iqembu elimthatha “njengesikhali”esabe sisetshenziswa ukujivaza umsunguli weqembu.
Ubufakazi balokhu babukhomba ebhukwini lakhe uMzala Nxumalo ethi Gatsha : A Chief with a Double Agenda. Udaba oluthinta uMzala Nxumalo aluqali ukuphazamisa izinhlelo zalamaqembu womabili njengoba lwaphazamisa izingxoxo zokubuyisana ezamenyezelwa phambilini.
Ukugqubuzana kwe-Inkatha ne-IFP
Phezu kwesinqumo, leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi isinqumo sokungasebenzisani ne-ANC sesiqalile ukuhunyushwa ngezindlela ezingafani ngubuholi beqembu.
Lapha ukuhumusha kukabili kukhona abathi inkulumo kaHlabisa yayisho ukungasebenzisani noKhongolose kuzwelonke kanti okunye kuthi uKhongolose okwabe kukhulunywa ngawo ngowaKwaZulu-Natal kuphela. Kulaba abahumusha kanje bakholwa wukuthi kungaba nobudlelwane ne-ANC eGoli. Lokhu ngahumushi ngendlela efanayo ngokomthombo welaboHlanga bugqame emhlanganweni waleli qembu kuleli sonto.
Kulabo abaseka ukuba uKhongolose ujeziswe kuzwelonke bathi ukusebenza nawo kungahle kunenge abavoti asebewuhlamukile uKhongolose. Bathi abavoti bazojezisa iqembu eminyakeni emibili uma ngabe like lafaka uKhongolose “ngewindi”. Bathi uma bengami kusinqumo sabo kuyokwenza uKhongolose uqhubeke nodaba lukaMzala Nxumalo.
Ngakolunye uhlangothi abavumelana nokubambisana eGoli bathi lokho kuyosondeza iqembu emandleni nasemalini njengoba bekwenzeka nje. “EGoli siyingxenye yokuphatha, yithi esithatha izinqumo ngakho uma singavumela isijezizo lesi sifike nakhona kuyosho ukuphela kwamandla lawa amancane esinawo nesikwazi ukwenza izinto eziningi ngawo”, kusho omuye umthombo ongathandanga ukuba igama lawo lidalulwe noweseka abaseGoli.
Ngokophenyo loZul’azayithole kukhona ukungaboni ngasolinye kwabathile abangamalungu nabaholi eGoli (ElaboHlanga amagama abo linawo). Lokhu akuhlangene nenqubomgomo kepha kungendlela okumele iqembu libukeke ngayo.
Amalungu e-IFP eGoli ahlukene izigaba ezimbili, kukhona labo izingxabo zabo ziKwaZulu-Natal njengoba abazali babo noma bona qobo bedabuka kweleNdlovukazi uMthaniya. Laba bancike kakhulu emahostela futhi iningi labo ngamalungu eNkatha ingakabizwa ngeqembu lepolitiki Inkatha Freedom Party.
Abanye babekhona ngesikhathi umkhonto ugwaza ekhaya phakathi kwe-Inkatha ne-ANC, zafa izihlobo zabo abanye baboshwa abanye bayizizukulwane zalaba ababe yi-Inkatha eGoli ngeminyaka ye-1990. Khona lapho kukhona amalungu avela emalokishini aseGoli wona angenazo izingxabo ezitheni kweleNdlovukazi.
Ngokwalamalungu i-IFP kumele izigeze isithombe sokuba “ngophuma silwe”ukuze ikwazi ukuheha abantu basemalokishini. Bathi isithombe sokuthi amalungu e-IFP ngabantu abadala abahlala emahostela siyingozi ngoba singabalekisa amavoti.
“Abantu baseGoli bazi Inkatha iphatha izinduku, ixabana nabantu basemalokishini. Yazi kungabantu abanonya abahlala emahhositela. Thina eGoli sifuna abantu bazi i-IFP entsha, eyamukela zonke izizwe nezinhlanga. Eyamukela abasemalokishini nasemadolobheni. Asifuni uma kunento yaseNatal bese iphazamisa uzinzo kithi eGauteng”, kusho omunye olilungu le-IFP eGoli.
Nokho kulabo abaphikisana nabaseGoli baveza ukukhuluma okuthi ubudlelwane noKhongolose eGoli kuzuzisa abathile. “Akudingi ukuthi uze wenze uphenyo olunzulu, bheka indlela yokuphila kwabaholi abathile eGoli kusuka nje kube nesivumelwane ne-ANC. Abantu banamabhizinisi, banezimoto nemizi ngenxa yento abathi ukubambisana”, kusho omunye umholi weqembu.
Lo mholi usho lokhu nje ElaboHlanga linenkulumo eqoshiwe enemizuzu engama-23:12 nelayithola eminyakeni eyedlule. Kule nkulumo umholi we-IFP eGoli uyakuveza ukwabiwa kwezingqoko eGoli nezivela ngoba leli qembu njengengxenye yesivumelwane belisingethe iminyango emibili eMkhandlwini iGoli; eZokuthutha neZezindlu.
Uyakuveza ukuthi amavenge aphuma lapho kanti oZul’azayithole banayo imininingwane yezindawo nabantu abahlomulayo kanjalo nesamba. Obunye ubufakazi obukhona ngokuxhumana kwabanye abaholi beqembu abangahlali eGoli kepha abasohlakeni oluphezulu lweqembu.
Ngokuthola kwelaboHlanga lesi simo yiso esidale ukucija kwemikhonto emhlanganweni owedlule nesenza izinhlangothi zombili ziqhubeke nokuzama ukuqinisekisa ukuthi isinqumo sokugcina ngokusebenzisana sivuna zona.
Namuhla ngoLwesihlanu kunomhlangano Ondini nozoqedela amagama ezimeya kepha lolu daba kulindeleke ukuba liphakame yingakho ngokwemithombo yanhlangothi zombili wonke umuntu engafisi kuhlanganwe engekho uMntwana nobukwa njengenomfi engenza iqembu ledlule kulokho.
Njengoba kwabe kunjalo eminyakeni eyedlule lapho uMntwana ayezama ukukhumuka ejokeni, nakulokhu kubukeka ziyoba khona izizathu ezizokwenza abanye bathi angajahi.
nguMfo waKwaNomajalimane Nov 16, 2021